Telecom ebe ike ọkọnọ usoro - China Renergy Equipment Co., Ltd
Telecom ebe ike ọkọnọ usoro
Micro okporo usoro
Gbanyụọ-okporo ifufe ike ọkọnọ
Gbanyụọ-okporo ifufe anyanwụ na dizel
Telecom ebe ike ọkọnọ
Wind anyanwụ na okporo ngwakọ
Obere ifufe turbines bụ zuru okè ngwọta maka Telecommunication oru.
Telecom ụgbọ na-gbapụ n'ụba gburugburu ụwa iji hụ a ezu nkwurịta okwu akụrụngwa. Na ọtụtụ n'ime ime obodo, na ike a chọrọ maka ndị a ụgbọ na-emekarị nyere via environmentally keonyeiro dizel generators, nke na-abụghị nanị ọnụ na-arụ ọrụ ma na-na nọgidere na-abawanye nke mmanu ndi mere onwe mmanụ ụgbọala esenyịn, na ojiji nke dizel generators ga-adịghị anya ibu unsustainable.
Renergy ifufe turbines na ala ọrụ na mmezi chọrọ ka echichi n'ime ime obodo na nke siri ike ọrụ ebe ọzọ mara mma.
Ngwa: Iji nye a pụrụ ịtụkwasị obi, na-eri-irè na environmentally ụda ike isi iyi maka China mobile telecom ebe dị n'ime ime obodo ebe.
Site n'afọ nke 2008, Renergy ka abuana ke imewe nke a pụrụ ịdabere na isi iyi nke ike maka telecom ụgbọ n'ime ime obodo ebe maka China mobile. Ọtụtụ ndị ọhụrụ na saịtị ma ọ bụ na-emelite na saịtị na-wuru na ugwu nile, ọ dị mkpa na netwọk Mee na mmezi nwere ike na-ebu mgbe niile nke afọ mgbe n'ibelata saịtị nleta
The isi ngwá ọrụ nke ike ọkọnọ usoro bụ Renergy Wind tobaim. Ọ na-eji dị ka a isi mmewere nke ime ike usoro n'ime ime obodo ebe. Dị ka ndị dị otú ahụ, a tobaim pụtara onwe ya a ọtụtụ afọ na nnọọ aka ike ókè nke ihu igwe na nwere ike idi ke edere na ndịda ọdịda anyanwụ nke China. Northwest ebe bụ ikuku na-eku ebe; ọtụtụ n'ime MW ifufe ugbo na-emi odude n'ebe. Ike gusts nke ifufe nwere ike ime n'oge ọ bụla nke afọ, karịsịa n'oge oyi, na a na-mere njọ n'ihi na elu elu na ndị ọzọ gụrụ ebe ebe telecom ụgbọ a ga-wuru. Ọ dị oké mkpa na ihe ọ bụla na ngwá arụnyere na ndị a ebe bụ inogide na a pụrụ ịdabere na ebe-achọ kacha nta mmezi.
The usoro a arụmọrụ ebe ọ bụ na 2009 na ike usoro na nwụnye saịtị rụrụ nnọọ nke ọma. Renergy arụnyere ọtụtụ narị ndị dị otú ahụ na usoro maka China mobile. Ma mgbe ahụ, Renergy malitere inye ndị dị otú ahụ na usoro maka China Union, China Telecom.
N'ihi ya, anya, Renergy nyere ọtụtụ narị ndị dị otú ahụ na usoro maka telecom ahịa na Russia, Tajikistan na Iran.
Wind tobaim na anyanwụ panel n'ịwa ọkụ eletrik, na-ana n'ime DC48 batrị otu site 48V ifufe na anyanwụ ngwakọ njikwa, ọkọnọ ike maka telecom ibu.
Dizel generator ike ga-eji dị ka ndabere ike ọkọnọ. System nwere ike ókè-enye AC ike site na anya okporo inverter, na-dịnụ jikọọ okporo site na okporo inverter.
RW-5kW agbanwe pitch, DC200V
Tower na ngwa
8m, monopole elu
Solar panel na mgbodo
Batrị na mgbodo
1. Multiple anyanwụ panel njikọ
2. Multiple ifufe tobaim njikọ
3. dizel generator dị ka ndabere
4. Solar MPPT ọrụ
5. Wind tobaim MPPT ọrụ
6. Solar ike mmepụta voltaji akara
7. Wind ike mmepụta voltaji akara
8. Digital batrị ike management usoro
9. Intelligent ibu management usoro
10. System kpatara Ịchọpụta Otú Nsogbu na nlekota usoro
11. Ikuku nyefe usoro
12. Wind tobaim agba ọsọ management.
Telecom ojii, mgbaàmà ọdụ, GSM isi ojii na na.
Ngwa ikpe ọmụmụ
Telecom ojii ikpe ọmụmụ
Post oge: Apr-19-2018